Vaovao - Ireto teboka fahalalana ireto amin'ny milina fonosana dia tena zava-dehibe
Raha miresaka milina famonosana dia mino aho fa olona maro no manana fahatakarana momba azy, koa andao hofintinina ny hevi-dehibe momba ny milina fonosana.
Ny fitsipiky ny fiasan'ny milina famonosana
Ny masinina fonosana dia mizara karazany maro arakaraka ny karazany sy ny fampiasana azy, fa ny fitsipika fototra kosa dia mitovy avokoa. Izy rehetra dia mampiasa fitaovana fonosana ary tarihin'ny fehikibo. Ny fizotry ny fiakarana, ny famehezana sns dia miaro azy amin'ny hamandoana, ny fahasimbana na ny fitaterana mora.
Olana mahazatra amin'ny milina famonosana sy vahaolana
Amin'ny fampiasana isan'andro, ny milina famonosana matetika dia manana olana maro toy ny fahapotehan'ny fitaovana, horonantsary fonosana tsy mitovy, tsy fitombenana tombo-kase ny fonosana fonosana, ary ny fametrahana ny marika miloko tsy marina. Ny fahaizana teknika voafetra an'ny mpandraharaha matetika dia mahatonga ny milina fonosana tsy hiasa ara-dalàna. Inona no mahatonga ny milina fonosana tsy hiasa ara-dalàna, andeha hojerentsika ny tsy fahombiazan'ny milina fonosana sy ny fomba famahana azy? Ny fitaovana fonosana dia tapaka. Antony:
1. Ny fitaovana fonosana dia misy tonon-taolana sy burrs miaraka amin'ny fahatapahana be loatra.
2. Ny faribolan'ny motera fahana taratasy dia diso na tsy mifandray amin'ny laoniny ilay faritra.
3. Simba ny switch of proximity feed paper.
1. Esory ny fizarana taratasy tsy mendrika.
2. Araraoty ny fizaran-tariby mamelona taratasy.
3. Soloy ny switch of proximity feed paper. 2. Tsy voafehy mafy ilay kitapo.
1. Ny sosona anatiny amin'ny fonosana fonosana dia tsy mitovy.
2. Fanerena famehezana tsy mitovy.
3. Ny mari-pana famehezana dia ambany.
1. Esory ireo fitaovana fonosana tsy mendrika.
2. Amboary ny tsindry famehezana.
3. Ampitomboy ny hafanan'ny famehezana hafanana.
Ity voalaza etsy ambony ity dia momba ny fitsipiky ny masinina fonosana sy ny antony mahatonga ny tsy fahombiazana roa sy ny fomba famahana olana. Raha te hahalala misimisy kokoa ianao dia jereo tsara ny fizarana vaovao an'ny Shanghai Tops Group. Mianara bebe kokoa amin'ny nomerao manaraka.